Izindaba - Inqubo yokuphrinta ye-Sublimation
Iyini inqubo yokuphrinta ye-sublimation
Ukuphrinta kwe-Sublimation kuqala kusebenzisa ukuphrinta ukuphrinta odayi abakhethekile bokuphrinta ephepheni lokudlulisa, bese kuthi ukushisa nemishini kudlulisele odayi endwangu. Ngokuqondile, kusekelwe kuzimpawu ze-sublimation zodayi abahlakazekile, khetha ukusabalalisa odayi ngebanga lokushisa le-sublimation lika-180 ~ 240 ℃, bese ulixuba nesilayidi ukwenza ama-inki ombala. Ngokuya ngamaphethini ahlukahlukene nezidingo zephethini, i-Ep ~ J, I-color ink iphrintiwe ephepheni lokudlulisa, iphethini nephethini ephrintiwe yokudlulisa iphepha kuxhumana eduze nendwangu, futhi udayi udluliswa usuka ephepheni lokuphrinta uye endwangwini ngemuva ukucubungula kumshini wokuphrinta wokudlulisa ku-200 ~ 230 ℃ wama-10 ~ 30s. Ngemuva kokusakazeka, ingena ngaphakathi kwendwangu ukufeza injongo yokufaka imibala. Ngenkathi yokufudumeza kanye ne-sublimation, ukuze idayi isabalale ngokuqondisa, i-vacuum ivame ukudwetshwa ohlangothini ngaphansi kwento edayiwe ukufezekisa ukusabalalisa okuqondisayo nokudluliswa kwedayi nokwenza ngcono ikhwalithi yokudlulisa.
Izinzuzo zenqubo yesikibha ye-T-shirt ngokwezifiso: umphumela omuhle wokuphrinta
Lapho izidingo zokwenza ngokwezifiso ze-T-shirt ziqine ngokwedlulele, inqubo yedayi yokuthambisa iyisinqumo esihle. Indwangu ephrintiwe ngobuchwepheshe bokudaya bokudaya sublimation inamaphethini amahle, imibala egqamile, izingqimba ezicebile nezicacile, ubuciko obuphezulu, nomuzwa oqinile wobukhulu obuthathu. Kunzima ukuphrinta ngezindlela ezijwayelekile, futhi ungaphrinta izithombe namaphethini wesitayela sokupenda.
Izinzuzo zenqubo yesikibha ye-T-shirt ngokwezifiso: umkhiqizo ophrintiwe uzizwa uthambile futhi unempilo ende yokusebenza.
Isici esikhulu sokudluliswa kukadayi Sublimation ukuthi udayi ungangena ungene ku-polyester noma ku-fiber, futhi umkhiqizo ophrintiwe uzizwa uthambile kakhulu futhi unethezekile, futhi empeleni akukho ungqimba lukayinki. Ngaphezu kwalokho, ngoba uyinki usuvele womile ngesikhathi senqubo yokudlulisa, impilo yesithombe yinde nje njengempilo yengubo uqobo, futhi ngeke kube khona ukugqashuka kwemidwebo ephrintiwe, ezothinta ubuhle bendwangu .